Manam-pahaizana ara-pambolena voaroaka noho ny fanehoana ahiahy amin’ny fandraràna ny fambolena ara-simika ao Sri Lanka · Global Voices teny Malagasy
Manampy trotraka ny krizy ara-tsakafo ankehitriny ny fiovana tampoka ho amin'ny fambolena organika
Voadika ny 02 Novambra 2021 4:30 GMT
Voamaina ao Negombo, Sri Lanka. Sary avy amin'ny Flickr an'i Mike. CC BY-NC 2.0.
Miatrika krizy ara-tsakafo i Sri Lanka. Tamin'ny taona 2021, nilatsaka 7,5 isanjato manoloana ny dolara amerikana ny Ropia SriLankey, niteraka fisondrotana vidin-tsakafo hatramin'ny 10 isanjato. Tamin'ny 30 aogositra 2021, nanambara ny hamehana ara-toekarena ny Filoha Sri Lankey Gotabaya Rajapaksa mba hifehezana ny fiakaran'ny vidin-tsakafo sy hanakanana ireo mpandraharaha tsy hanafim-bokatra. Noraisina ny fepetra mba hanaraha-maso ny famatsiana ny sakafo fototra sy hametrahana vidiny mora ho an’ireo mpanjifa ary hifehezana ny fidangan’ny vidim-piainana.
Na izany aza, nolavin'ny governemanta ny fisian'ny krizy ara-tsakafo ao Sri Lanka, ary nilaza fa tsara vintana ny firenena mahatohitra ny krizy ara-tsakafo manerantany nateraky ny COVID-19.
Milaza ireo manam-pahaizana sasany fa ny fiovan'i Sri Lanka tampoka ho amin'ny fambolena organika feno no nahatonga ity krizy ity. Nankatoavin'ny kabinetran'i Sri Lanka ny fandraràna ny fanafarana zezika simika sy ny akora fambolena simika hafa tamin'ny 29 Aprily 2021. Nampanantena i Rajapaksha avy eo fa hanafoana ny fampiasana zezika simika ao Sri Lanka, ka izy no firenena voalohany maneran-tany nanao izany.
Nampitandrina i Saman Dharmakeerthi, Profesora momba ny Fahavokaran'ny tany sy ny Fambolena Ara-tsakafo ao amin'ny Fakiolten'ny Fambolena ao amin'ny Oniversiten'i Peradeniya fa “tsy lalana ho any amin'ny fambolena maharitra sy ny fanjarian-tsakafo ny fambolena organika” ary mety hitarika any amin'ny krizy ara-tsakafo izany.
Tamin'ny 26 Oktobra 2021, nanambara tamin'ny filazana iray ny Minisiteran'ny Fambolena fa nesoriny tamin'ny toerany rehetra tao amin'ny governemanta ny Profesora Buddhi Marambe, mpanolotsaina ambony taorian'ny nanakianany ny politikan'ny governemanta tamin'ny firosoana tamin'ny fambolena organika feno. Miasa ao amin'ny Fakiolten'ny Fambolena ao amin'ny Oniversiten'i Peradeniya ihany koa ny Profesora Marambe, ary ny fiampangana azy dia izy namoaka lahatsoratra mitsikera ny fihetsiky ny governemanta ary voatsonga betsaka tamin'ny vaovao.
Nalaka Gunawardene, Sri Lankey mpanoratra siansa naneho hevitra tao amin'ny Twitter:
Science & reason keep losing out in #SriLanka govt's rush to turn whole country's farming #organic at once. Top agri expert @BuddhiMarambe was sacked this week from advisory posts for questioning hasty, unrealistic process that threatens #lka food securityhttps://t.co/sGFPHRfPsT pic.twitter.com/Es0jLMCZ1N
— Nalaka Gunawardene (@NalakaG) October 27, 2021
Resy hatrany ny siansa sy ny saina ao anatin'ny firotorotoan'ny governemanta #SriLanka hamadika ny fambolena manerana ny firenena ho #organika indray mandeha. Voaroaka tamin'ity herinandro ity teo amin'ny toeran'ny mpanolotsaina ny manam-pahaizana ambony momba ny fambolena @BuddhiMarambe noho ny fanahiany amin'ny dingana maimaika sy tsy mitombina izay manohintohina ny fiarovana ara-tsakafo #lka
Inona no miteraka krizy ara-tsakafo
Manafatra ampahany betsaka amin'ny filany ara-tsakafo ny firenena-nosy Sri Lanka , ao anatin'izany ny entana tena ilaina toy ny lafarinina varimbazaha, ny siramamy ary ny voamaina. Nandritra ny volana Aogositra sy Septambra 2021, kaontenera 1000 mahery misy ireo sakafo ilaina no niandry ny hamoahana entana avy ao amin'ny seranan-tsambon'i Colombo, miaraka amin'ireo mpanafatra mitolona handoa ny faktioran'ny fanafaran'entan’izy ireo noho ny tsy fahampian'ny dolara Amerikana. Niteraka tsy fahampian'ny famatsiana izany, ka nampiakatra ny vidin'ireo sakafo ilaina. Tamin'ny 8 Oktobra 2021, nofaranan'ny ny governemanta ny rafi-panarahamaso ny tolo-barotra mampiadihevitra momba ireo zavatra ilaina mba hampitsaharana ny varo-maizina eny an-tsena, izay nahatonga ny fiakarana bebe kokoa amin'ny vidin'entana.
No shortage of Food for thought amidst Food crisis.
Cartoons by @RcSullan @Nikshazz and @NamalAmarasing #FoodCrisis #SriLanka #LKA #Cartoons pic.twitter.com/TfdmCpey62
— Groundviews (@groundviews) October 21, 2021
Tsy misy ny tsy fahampian'ny sakafo hampisaina ao anatin'ny krizy ara-tsakafo.
Sariitatra avy amin'i @RcSullan @Nikshazz sy @NamalAmarasing #FoodCrisis #SriLanka #LKA #Cartoons
Tamin'ny taona 2020, nisy fiantraikany ratsy tamin'ny toekaren'i Sri Lanka ny valan'aretina, izay nihena ho 3,6 isan-jato. Tamin'ny volana Jolay 2021, nidina ho 2,8 miliara dolara ny tahirim-bola vahiny, raha 7,5 miliara dolara tamin'ny taona 2019. Niakatra be ihany koa ny vesatry ny trosan'ny firenena tao anatin'ny folo taona, araka ny tarehimariky ny Banky Iraisam-pirenena.
Na izany aza, maro no mihevitra fa antony lehibe mahatonga ny krizy ara-tsakafo ny fandraràna ny zezika simika. Mpamboly iray naneho ny ahiahiny tao amin'ny tranokalan'ny fanaovan-gazety olom-pirenena Sri Lanka Groundviews tamin'ny Mey 2021:
If the ban on chemical fertilizer is implemented, there will be a massive reduction in agricultural output in the near term creating shortages, riots and unprecedented price rises of products and we will simply not be able to feed the population without a substantial increase in imports.
Raha ampiharina ny fandraràna ny zezika simika, dia hisy fihenana goavana maharitra fohy amin'ny vokatra ara-pambolena ato ho ato ka miteraka tsy fahampiana, korontana ary fiakaran'ny vidim-bokatra tsy mbola nisy toy izany ka tsy ho afaka hamelona fotsiny ny mponina isika raha tsy misy fitomboana fanampiny amin'ny fanafarana entana.
Miova ho organika 100 isanjato—aloha loatra?
Manoloana ny fanapahan-kevitry ny kabinetra, dia noraràn'ny governemanta Sri Lanka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 6 May 2021 ny fanafarana zezika sintetika sy vokatra simika ara-pambolena, anisan'izany ny fanafody ho an'ny anana sy ny famonoana bibikely. Niteraka krizin'ny zezika tao anatin'ny volana vitsivitsy izany satria mbola tsy maintsy nafarana ny hafa azo hanoloana azy ireny.
Araka ny fanadihadiana nataon’ny Verite Research, tamin’ny Jolay lasa teo, dia ny 9 isanjaton’ny tantsaha Sri Lankey ihany no tsy mampiasa zezika simika, ary miantehitra be amin’ny simika kosa ny 76 isanjaton’izy ireo. Na dia maro aza no manohana ny fanapahan-kevitry ny governemanta hiova amin'ny organika, nilaza ny 80 isanjaton'ireo namaly fa mila herintaona farafahakeliny izy ireo mba hiomanana.
Milaza ny tatitra sasany fa tsy dia mahomby noho ny zezika simika ny zezika organika, ary misy fiantraikany amin'ny famokarana, mampihena ny vokatra hatramin'ny 25 isanjato. Nandrahona ny indostrian'ny dite sarobidy ao Sri Lanka ny toe-javatra ary atahorana ny voina ara-pambolena.
Nanoratra fanehoan-kevitra tao amin'ny Daily FT, gazety nasionaly mpivoaka isan'andro momba ny fandraharahana ao Sri Lanka ny Profesora Gamini Herath, fa “ny fampidirana ny fambolena 100% organika tsy misy drafitra sahaza ataon'ny manam-pahaizana dia fomba fanao tonga lafatra hisian'ny korontana” ary “tsy mitombina mihitsy ny fiovana feno ho amin'ny fambolena organika araka ny vinavinan'ny governemantan'i Sri Lanka.”
Saloni Shah, mpandinika ara-tsakafo sy lasitra (fanoritan-joro), nisioka hoe:
The Sri Lankan government has banned synthetic fertilizers, widely used in growing tea and rice in the country, for months. The consequences call for greater nuance in conversations around fertilizer use, especially in LIMCs, where a complete shift to organic ag is unfeasible
— Saloni Shah (@SaloniShah101) September 14, 2021
Noraràn'ny governemanta Sri Lanka ny zezika sentetika, ampiasaina betsaka amin'ny fambolena dite sy vary ao amin'ny firenena, nandritra ny volana maro. Mitaky fiovana lehibe kokoa amin'ny resaka momba ny fampiasana zezika, indrindra amin'ny LIMCs, izay tsy azo anatanterahana mihitsy fiovana feno ho amin'ny fambolena organika ny vokatr'izany.
Tao anatin'ny volana vitsivitsy izay, nanomboka nanao fihetsiketsehana ireo tantsaha manerana an'i Sri Lanka mba hitaky vahaolana amin'ny krizin'ny zezika.
Chandrasena Maliyadde nanoratra tao amin'ny Groundviews:
On April 29, President announced that Sri Lanka would transform agriculture from chemical fertilizers to organic substitutes. The advice of experts and practitioners in agriculture was not sought. Conversion to organic agriculture has to be done in a systematic, scientific manner based on research and lesson learning rather than being rhetoric and emotional. The end result is the farmers have come off the field onto the highways.
Tamin'ny 29 aprily, nanambara ny filoha fa hanova ny fambolena avy amin'ny zezika simika ho soloina organika i Sri Lanka. Tsy notadiavina ny torohevitr’ireo manam-pahaizana sy ireo mpanao fampiharana momba ny fambolena. Tsy maintsy atao amin'ny fomba ara-tsiantifika sy ara-potoana mifototra amin'ny fikarohana sy lesona nianarana ny fiovana ho amin'ny fambolena organika fa tsy amin'ny kabary sy ny fihetseham-po. Vokany, nivoaka avy eny an-tsaha hihazo ny lalam-pirenena ireo tantsaha.
Na dia mbola misy aza ny adihevitra momba ny hoe mitombina sa kabary fotsiny ny fandraràna ny zezika simika, sy ny hoe inona no lesona azo tsoahina avy amin'ity krizy ity, mampitandrina i Vidura Munasinghe ao amin'ny Groundviews:
If the state’s ban on chemical fertilizer fails; it will kill hopes for food security, healthy food, the possibility of alleviating poverty among farmers and a sustained ecosystem.
Raha tsy nahomby ny fandraràn'ny fanjakana ny zezika simika; dia hamono ny fanantenana ho an'ny fanjarian-tsakafo, sakafo ara-pahasalamana, ny mety hanamaivanana ny fahantrana eo amin'ny tantsaha ary ny tontolo iainana maharitra izany.
Nepal 7 andro izay